Ny demôkrasia (avy amin'ny fiteny grika, izay midika hoe "fanjakan'ny vahoaka") dia karazana fitondram-panjakana ahitana rafitra misy olona afaka manapa-kevitra mikasika ny fomba tokony hitondrana ny fireneny na ny fikambanam-pirenena.
Ny tena karazana demôkrasia mahazatra dia ny demôkrasia amin'ny alalan'ny solontena (mpitondra fanjakana) fidian'ny olona (ara-dalàna amin'ny alalan'ny fifidianana), manapa-kevitra mikasika ny lalàna. Atao isaky ny taona vitsivitsy ny fifidianana. Amin'izany fotoana izany dia izay mahazo vato be indrindra no mahery indrindra, mandra-pahatongan'ny fifidianana manaraka.
Ny antoko pôlitika dia ampahany manan-danja ao amin'ny demôkrasian-tsolontena. Mpikambana ao amina antoko pôlitika iray ny mpanao pôlitika, fikambanana iombonan'ny mpanao pôlitika mitovy hevitra momba ny zavatra tokony hatao. Noho izany, eo amin'ny fifidianana, ny olona dia tsy hifidy fotsiny olona iray, fa ho an'ny antoko pôlitika iray. Mandalo matetika amin'ny fanamafisana demôkratika ny fanjakana iray mba hahamarin-toerana ny demôkrasia.
Maro ny karazana demôkrasia, fa misy endrika fototra roa. Ireo endrika roa ireo dia mikasika ny fomba fanatanterahana ny sitrapon'ny olom-pirenena rehetra. Ny demôkrasia mivantana dia demôkrasia andraisan'ny olom-pirenena rehetra anjara amin'ny fanapahan-kevitra pôlitika. Amin'ny demôkrasia môderina dia omena olona vitsy ny fahefana. Ny rafitra mitovitony izay mampikambana ampahan-demôkrasia amin'ny lalàna sarià (silamo) dia antsoina hoe "islamôkrasia".
Tsy misy fomba famaritana ny demôkrasia iaraha-manaiky, fa ny tondro tena ilaina dia ny fitovian-jo sy ny fahafahana ara-pôlitika ary ny fanjakana tan-dalàna. Ireo fototra ireo dia hita taratra amin'ny hoe "samy mitovy zo eo anatehan'ny lalàna ny olom-pirenena rehetra". Ao amin'ny demôkrasia entin-tsolontena dia mitovy lanja avokoa ny vato alatsaka, ary tsy misy famerana diso tafahoatra amin'ny olona izay te ho solontena, ary koa ny fahafahan'ny olom-pirenena manana zo ary fahafahana arovan'ny lalàmpanorenana.
Ny fanjakan'ny maro an'isa indrindra ihany koa dia anisan'ny tondron'ny demôkrasia. Izany dia mamela ireo antoko pôlitika madinika ho voagejan'ny "antoko pôlitika lehibe", rehefa tsy misy ny fiarovana ny zon'ny olon-tokana na fikambanan'olona.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Demôkrasia&oldid=996883"
Dernière modification le 9 Septambra 2020, à 09:32
Voaova farany tamin'ny 9 Septambra 2020 amin'ny 09:32 ity pejy ity.